उबन्टुको साथ हाम्रो सर्वरमा गिटलाब कसरी स्थापना गर्ने Ubunlog
केही हप्ता पहिले हामीलाई थाहा थियो Microsoft द्वारा GitHub को अचानक खरीद। एक विवादास्पद खरीद जुन धेरैले यसलाई बनाएको जस्तो गरीरहेको छ वा यसलाई कडा आलोचना गरे जस्तो गरीन्छ यदि यो नि: शुल्क सफ्टवेयरको पतनको आगमन हो। व्यक्तिगत रूपमा, म विश्वास गर्दछु वा ती दुबै स्थान मध्ये कुनै एकको रक्षा गर्दैन तर यो सत्य हो कि त्यस्ता समाचारहरूले धेरै सफ्टवेयर विकासकर्ताहरूलाई गीथब सेवाहरू छोड्न र माइक्रोसफ्टले खरीद गर्नु अघि गिथबको रूपमा निःशुल्क अन्य विकल्पहरू खोज्न बाध्य तुल्याएको छ।
त्यहाँ धेरै सेवाहरू छन् जुन लोकप्रिय हुँदैछन्, तर धेरै विकासकर्ताहरूले GitLab प्रयोग गर्न छनौट गरिरहेका छन्, एक नि: शुल्क विकल्प जुन हामी हाम्रो कम्प्युटरमा उबन्टुसँग वा निजी सर्भरमा स्थापना गर्न सक्छौं जुन उबन्टुलाई अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा प्रयोग गर्दछ।
1 GitLab के हो?
2 उबुन्टु सर्भरमा GitLab स्थापना गर्न हामीलाई के चाहिन्छ?
3 GitLab स्थापना
4 गितलाब सीई कन्फिगरेसन
5 Gitlab वा GitHub कुन राम्रो छ?
GitLab के हो?
तर सबै भन्दा पहिले, यो के ठीक हो हेरौं। गितलाब सफ्टवेयर संस्करण नियन्त्रण हो जुन Git टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ। तर अन्य सेवाहरूको विपरित, यसले विक्स सेवा र बग ट्र्याकिंग प्रणाली जस्ता Git बाहेक अन्य कार्यहरू समाहित गर्दछ। सबै GPL लाईसेन्स अन्तर्गत लाइसेन्स छ, तर यो सत्य हो कि अन्य प्रकारको सफ्टवेयर जस्तै WordPress वा Github मा जस्तै, कोहीले पनि Gitlab प्रयोग गर्न सक्दैनन्। गिटलाबसँग वेब सेवा छ जुन यसका ग्राहकहरूलाई दुई प्रकारका खाताहरू प्रदान गर्दछ: नि: शुल्क खाता नि: शुल्क र सार्वजनिक भण्डारहरू र अर्को भुक्तान गरिएको वा प्रीमियम खाताको साथ जुन हामीलाई निजी र सार्वजनिक भण्डारहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
यसको मतलब यो छ कि हाम्रो सबै डेटा सर्भरमा होस्ट गरिएको छ बाह्य सर्भरमा जसको नियन्त्रण हामीसँग छैन, जस्तै गिथूबसँग। तर गिटलाबसँग संस्करण कहलाइन्छ गित्लाब सीई o समुदाय संस्करण कि हामीलाई स्थापना गर्न र हाम्रो सर्वर वा कम्प्युटरमा एक गिटलाब वातावरण को लागी अनुमति दिन्छ उबुन्टुसँग, यद्यपि सबै भन्दा व्यावहारिक भनेको यसलाई उबुन्टुको साथ सर्वरमा प्रयोग गर्नु हो। यो सफ्टवेयरले हामीलाई गिटलाब प्रीमियमको फाइदाहरू प्रदान गर्दछ तर यसको लागि केही तिर्नुपर्दैन, किनकि हामी सबै सफ्टवेयरहरू हाम्रो सर्वरमा स्थापना गर्छौं, अर्को सर्भरमा होइन।
गितलाब, गिथब सेवाको रूपमा, यस्तो रोचक स्रोतहरू प्रदान गर्दछ क्लोनिंग रिपोजिटरीहरू, जेकिइल सफ्टवेयरको साथ स्थिर वेब पृष्ठहरू विकास गर्दै छ वा संस्करण नियन्त्रण र कोड जसले हामीलाई सूचित गर्न अनुमति दिन्छ यदि सफ्टवेयर वा संशोधनमा कुनै त्रुटि छ वा छैन.
गितलाबको शक्ति गिथब भन्दा राम्रो छ, कमसेकम सेवा सर्तमा, यदि हामीले यसलाई हाम्रो सर्वरको आफ्नै सफ्टवेयरको रूपमा प्रयोग गर्यौं भने, शक्ति हाम्रो सर्वरको हार्डवेयरमा निर्भर गर्दछ। हामीले के गर्न जादैछौं भने हाम्रो निजी सर्वरमा गितलाब सफ्टवेयरको लागि गिथब सफ्टवेयर परिवर्तन गर्नु भनेको हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने केही कुरा।
उबुन्टु सर्भरमा GitLab स्थापना गर्न हामीलाई के चाहिन्छ?
हाम्रो सर्वरमा गितलाब वा गिटलाब सीई हुन, पहिले हामीले निर्भरताहरू वा सफ्टवेयर स्थापना गर्नुपर्दछ जुन सफ्टवेयरलाई सहि रूपमा काम गर्नको लागि आवाश्यक हुन्छ। यो गर्न हामी टर्मिनल खोल्छौं र निम्न लेख्दछौं:
सम्भवतः कर्ल जस्तो प्याकेज हाम्रो कम्प्युटरमा पहिले नै आउँछ तर यदि यो होईन भने यो स्थापना गर्न राम्रो समय हो।
अब हामीसँग सबै Gitlab निर्भरता छ, हामीले गितलाब सीई सफ्टवेयर स्थापना गर्नुपर्नेछ, जुन सार्वजनिक हो र हामी यसलाई उबन्टुको बाहिरी भण्डार मार्फत प्राप्त गर्न सक्छौं।। यो गर्न हामी टर्मिनल खोल्छौं र निम्न लेख्दछौं:
त्यहाँ अर्को विधि छ जुन बाह्य भण्डार प्रयोग गर्नु समावेश छ तर Apt-get सफ्टवेयर उपकरणको साथ। यो गर्न, टर्मिनलमा माथी लेख्नुको सट्टा, हामीले निम्न लेख्नुपर्दछ:
र यससँग हामीसँग हाम्रो उबन्टु सर्भरमा गिटलाब सीई सफ्टवेयर हुनेछ। अब यो राम्रोसँग काम गर्नको लागि केही आधारभूत सेटि settings गर्ने समय हो।
गितलाब सीई कन्फिगरेसन
हामीले गर्नुपर्ने पहिलो कुरा हो केहि पोर्ट जारी गर्नुहोस् कि गिटलाबले प्रयोग गर्दछ र ती बन्द हुनेछन् र हामी फायरवाल प्रयोग गर्छौं। हामीले खोल्ने पोर्टहरू वा गितलाबले प्रयोग गर्ने पोर्टहरू हुन् And० र 80 443.
अब हामीले पहिलो पटक Gitlab CE वेब स्क्रिन खोल्नु पर्छ, यसको लागि हामीले वेब ब्राउजर खोल्छ http://gitlabce.example.com हाम्रो ब्राउजरमा। यो पृष्ठ हाम्रो सर्वर को हो कि, तर, पहिलो पटक, हामी हुनु पर्छ प्रणालीमा पूर्वनिर्धारित रूपमा पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्। एकचोटि हामीले पासवर्ड परिवर्तन गरेपछि, हामीले दर्ता गर्नुपर्दछ वा नयाँ पासवर्ड र "रूट" प्रयोगकर्ताको साथ लगइन गर्नुहोस्। यससँग हामीसँग हाम्रो उबन्टु सर्भरमा गितलाब प्रणालीको निजी कन्फिगरेसन क्षेत्र हुनेछ।
यदि हाम्रो सर्वर सार्वजनिक उपयोग को लागी हो, पक्कै पनि हामीले https प्रोटोकल, वेब प्रोटोकोल प्रयोग गर्नु पर्छ जसले वेब ब्राउजिingलाई अधिक सुरक्षित बनाउन प्रमाणपत्र प्रयोग गर्दछ। हामी कुनै प्रमाणपत्र प्रयोग गर्न सक्दछौं तर गितलाब सीई स्वचालित रूपमा रिपोजिटरीको युआरएल परिवर्तन गर्दैन, यसको लागि हामीले यसलाई म्यानुअली गर्नुपर्दछ, त्यसैले हामी फाईल /etc/gitlab/gitlab.rb सम्पादन गर्छौं र बाह्य_ URL मा हामीले नयाँको लागि पुरानो ठेगाना परिवर्तन गर्नुपर्दछ।यस अवस्थामा, यो "s" अक्षर थप्न को लागी हो, तर हामी url लाई फरक पनि बनाउन सक्दछौं र हाम्रो वेब सर्वरको सुरक्षा बढाउन सक्दछौं। एकचोटि हामीले फाईल सेभ गरेर बन्द गर्‍यौं, हामीले टर्मिनलमा निम्न लेख्नुपर्नेछ कि परिवर्तन परिवर्तन स्वीकार्य हुनेछ।
यसले गितलाब सफ्टवेयरमा गरेका सबै परिवर्तनहरू प्रभाव पार्नेछ र यस संस्करण नियन्त्रण प्रणालीको प्रयोगकर्ताहरूको लागि तयार हुनेछ। अब हामी यस सफ्टवेयरको प्रयोग बिना कुनै समस्या बिना र कुनै पनि भुक्तानी नगरी निजी भण्डारहरू गर्न सक्दछौं।
Gitlab वा GitHub कुन राम्रो छ?
यस बिन्दुमा, निश्चित रूपले तपाईंहरू धेरैले सोच्नुहुनेछ कि कुन सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु राम्रो हो वा हाम्रो सफ्टवेयरको भण्डारहरू सिर्जना गर्न राम्रो छ। Github सँग जारी राख्न कि Gitlab मा स्विच गर्ने कि। ती दुबैले Git प्रयोग गर्छन् र परिवर्तन गर्न सकिन्छ वा सिर्जना गरिएको सफ्टवेयरलाई सजिलै एक भण्डारबाट अर्कोमा सार्नुहोस्। तर व्यक्तिगत रूपमा म गिथबसँग जारी राख्न सिफारिश गर्दछु यदि हामीसँग यो हाम्रो सर्वरमा छ र यदि हामीसँग केहि पनि स्थापना भएको छैन भने हामीले गितलाब स्थापना गर्नु पर्छ।। यसको कारण यो हो किनभने मलाई लाग्छ कि उत्पादकता सबै भन्दा माथि छ, र अर्को सफ्टवेयर परिवर्तन गर्नेको लागि जसको लाभहरू कम न्यूनतम छन् क्षतिपूर्ति हुँदैन।
यसको बारेमा राम्रो कुरा भनेको दुबै उपकरणहरू नि: शुल्क सफ्टवेयर हुन् र यदि हामीलाई थाँहा छ भर्चुअल मेसिन सिर्जना गर्नुहोस्, हामी दुबै कार्यक्रमहरू परीक्षण गर्न सक्छौं र देख्न सक्छौं कि कुनले हामीलाई उबन्टु सर्भर परिवर्तन वा बिगार्ने बिना कुनै सूट गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » उबन्टुको साथ हाम्रो सर्वरमा गिटलाब कसरी स्थापना गर्ने
एडगर Albalate Ibañez भन्यो
म gitea भनिने अर्को विकल्प प्रयोग गर्दछु। https://github.com/go-gitea/। तपाईं यसलाई प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ https://gitea.io
Edgar Albalate Ibañez लाई जवाफ दिनुहोस्
alt.com साइन अप गर्नुहोस्
Wilburnmosum लाई जवाफ दिनुहोस्
हाम्रो डायनासोर खेलहरू https://dinosaurgames.org.uk/ लाखौं वर्ष पहिले जनावरहरूको साथ मनोरंजन प्रस्ताव! तपाइँ नियान्डरथल्स र सबै प्रकारको डिनोहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ; टायरानोसौरस रेक्स, वेलोसिराप्टर्स, साथ साथै ब्रेचिओसौरस सबै समावेश छन्! हाम्रो डायनासोर स्तरहरूमा गेमप्लेका बिभिन्न प्रकारका हुन्छन्, लडाईदेखि अनलाइन पोकर सम्म। तपाइँले चाहानुभएको कुनै पनि प्रकारको अवरोध खेल्न सक्नुहुन्छ, अन्तमा तपाइँलाई प्रागैतिहासिक मनोरंजन दिउँसोको घण्टाको लागि! जीवहरू जस्तो बनाइएको जीवको रूपमा झगडा गर्नुहोस्, पृथ्वीलाई घुम्नुहोस्, र तपाईंको शत्रुहरू पनि खान्नुहोस्!
Justindam लाई जवाफ दिनुहोस्
विश्वको धेरै पहिलो ब्राउजरमा आधारित प्रथम व्यक्ति एगर! ब्रेकिंग प्राप्त गर्नुहोस्! तपाईको कक्षा चयन गर्नुहोस् र तपाईका दुश्मनहरूलाई यो std मल्टिप्लेयर शूटरमा एग्स्टस्ट्रिम पूर्वाग्रहको साथ अन्त गर्नुहोस्। घातक उपकरणहरू प्राप्त गर्नुहोस् जस्तै Scramble Shotgun साथ साथै EggK3 जब तपाईं विजयको बाटोमा हिड्नुहुन्छ। शेलशोकर्स अनब्लकमा प्रशंसा गर्नुहोस् https://shellshockersunblocked.space/
LelandHoR लाई जवाफ दिनुहोस्